निर्देशकको अधिकार नीतिगत रुपमा अगाडि बढाउन तत्पर छु-रक्षा सिंह राणा (अध्यक्ष,चलचित्र निर्देशक समाज) | Kendrabindu Nepal Online News
निर्देशकको अधिकार नीतिगत रुपमा अगाडि बढाउन तत्पर छु-रक्षा सिंह राणा (अध्यक्ष,चलचित्र निर्देशक समाज)
२८ माघ २०७६, मंगलवार १८:११
गत मंसिरमा भएको चलचित्र निर्देशक समाजको निर्वाचनले रक्षा सिंह राणालाई नयाँ अध्यक्ष चुनेको थियो । राणा निर्देशक समाजको दोश्रो महिला नेतृत्व हुन् । उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध छिन् । नेपाली चलचित्रप्रतिको योगदान र सक्रियताकै कारण उनी अध्यक्ष पदमा चुनिएकी थिइन् । अध्यक्ष बनिसकेपछि उनी के के गर्दैछिन् त ? यसै विषयमा केन्द्रबिन्दुकी संवाददाता सृजना राईले चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष राणासँग कुराकानी गरेकी छिन् ।
नेपाली निर्देशकहरूको अहिलेको अवस्था र स्तर कस्तो छ ?
पक्कै पनि अहिले नेपाली निर्देशकहरूको अवस्था नाजुक स्थितिमा रहेको छ । नेपाली चलचित्रहरू चलिरहेका छैनन् । निर्देशकहरूलाई चलचित्रको लगानी उठाउन समेत धौ धौ परिरहेको अवस्था छ । २०७६ सालको सुरुदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जतिपनि नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शन भए केही बाहेक अरुले व्यापार गर्न सकेका छैनन् । चलचित्र चलेपछि त निर्देशकहरुको अवस्था, स्तर, स्टाटस, भ्यालु राम्रो हुने हो ।
निर्देशक समाजको अध्यक्ष भएपछि तपाईंको सक्रियता देखिनु पर्ने होइन र ?
म अध्यक्षमा नियुक्त भएको जम्मा २ महिना पूरा हुँदैछ र ३ महिनाको समयलाई हामी परिक्षण अवधि नै मान्छौं र अहिले म पनि त्यही परिक्षण समयमै छु । आफूले नजानेका कुराहरू अग्रजहरूबाट सिकिरहेको छु । पक्कै पनि जुन किसिमको एजेण्डा लिएर हाम्रो संस्था अगाडि बढेको छ र जुन विश्वासले यो जिम्मेवारी दिनु भएको छ, त्यसलाई म आफ्नो सय प्रतिशत काम दिएर पूरा गर्नेछु ।
वरिष्ठ मानिएका निर्देशकहरू किन घर बसिरहेका छन् ?
वरिष्ठ भनेर के गर्नु अहिले साँच्चै भन्नु पर्दा चलचित्र उद्योग डामाडोल अवस्थामा छ । चलचित्र चल्यो भने त निर्देशक पनि चल्ने हो । चलचित्रको व्यापार छैन, नाजुक अवस्था छ । यी सबै समस्याहरुले निर्देशकहरू प्रायः घर बसिरहनु परेको छ । यसलाई सुधार्न हामी चलचित्र विकास बोर्डसँग मिलेर काम गर्दैछौं ।
नेपाली निर्देशकहरूको स्तर उकास्न के के कुरा सुधार्नु पर्ला ?
पहिलो कुरा भनेको टेक्निकल अपडेटिङ्मा कार्यशाला गर्न एकदमै आवश्यक छ । यसमा हामीले बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर ६ महिनाको प्रशिक्षण पनि दिने तयारी गरेका छौं । यसको रिजल्ट ढिला भए पनि राम्रो आउने अपेक्षा लिएकी छु । दोस्रो कुरा, सिनियरहरूसँग बसेर परामर्श लिने, निर्देशकहरू आफू पनि सिरियस भएर यस विषयमा अध्ययन गर्नु पर्नेछ ।
तपाईंका भावी कार्यक्रम के कस्ता छन् ?
सबैभन्दा पहिला हेल्थ इन्सुरेन्स सम्बन्धमा काम गर्नेछु । टेक्निकल पाटोलाई अघि बढाउनेछु । आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई जोड दिनेछु । जति पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भएका विकृतिहरु छन् , जस्तै निर्माता र निर्देशक मिलेर काम सुरु गर्छन् पछि मनमुटाव हुदै जान्छ र पारिश्रमिक समेत नदिनेसम्म केशहरू छन् , यसलाई निर्देशकको अधिकारको नीतिगत रुपमा अगाडि बढाउने साथै अक्षयकोष स्थापनाको लागि पहल गरिरहेकी छु ।
५ प्रश्न, निर्देशक, रक्षा
Prevखोकना र बुंगमतीबासीद्वारा काठमाडौंमा प्रदर्शन (भिडियो सहित)
सिभिल बैंकको निक्षेप २१ प्रतिशतले वृद्धिNext
प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको पक्षमा हुँदा अन्तरविरोध देखियो – मणिचन्द्र थापा (नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य)
‘वैदेशिक शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरुले सबै कुरा बुझेर जानुपर्छ’-प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष (इक्यान)
“सोचेभन्दा पनि दश गुणा राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं”-विशाल भण्डारी, निर्देशक (कमेडी च्याम्पियन)
‘सेन्टी भाइरस’ लाई माया गर्ने दर्शकप्रति आभारी छु’ : सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ (भिडियोसहित)
‘बलियो सरकारले काम पनि बलियो गर्न सक्नुपर्छ’ : कृष्ण धराबासी (वरिष्ठ साहित्यकार)
“जनावरसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबाट जोगिनुपर्छ”: डा. हेमन्त चन्द्र ओझा
गोकुल बाँस्कोटा न्याय माग्न पुगे अदालत
'सचिवालय बैठकको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु हुन्छ' : प्रचण्ड
इन्स्पेक्टर देवीप्रसाद पौडेलद्वारा बच्चा बोकेकी महिलामाथि लाठीचार्ज, चर्काे आलोचनापछि छानविन समित गठन
मिस मंगोल २०१९ सिभिरा ताप्लेजुङमा सम्मानित
चर्चित ज्योतिषी हरिहर अधिकारीको टिभी ‘शो’ अब केन्द्रबिन्दुमा (भिडियोसहित)
गोकुलको अडियो टेप नक्कली हो-प्रधानमन्त्री (भिडियोसहित)